Laba Suuriyaan ah oo lagu xiray Geneva - BBC News Somali
Laba Suuriyaan ah oo lagu xiray Geneva
Image caption Ammaanka magaalada Geneva ayaa aad loo adkeeyay maalmihii ugu dambeeyay
Masuuliyiinta dalka Switzerland ayaa sheegay in laba qof oo asalkoodu yahay Suuriya oo lagu xiray magaalada Geneva Jimcihii in baabuurkooda laga helay waxyaaba qarxa, laakiin aan laga helin sunta gaaska ah sida horey loo sheegay.
Dacwad oogaha ayaa ka sheegay shir jaraa'id in labada qof ay yimaadeen magaalada Geneva mar dhaw, isla markaana la filayo xarigga dad kale.
Mar sii horresyay, masuuliyiinta Swiss-ku waxay sheegeen in dacwad dambi in lagu soo oogo labada qof in la bilaabay iyada oo la isticmaalayo sharci mamnuucaya kooxaha xag jirka ah sida al Qaacidda iyo dowladda Islaamiga.
Magaalada Geneva oo ah xarunta Qaramada Midoobay ee Yurub ayaa waxay ku jirtay heegan sare oo xagga ammaanka dhawr maalmood.
Dacwad ooguhu waxa kale oo uu sheegay in hub laga helay guri gaar loo leeyahay markii ciidanka ammaanku galeen - laakiin tani lama xiriirto wax shirqool jihaad ah. Waxay aaminsan yihiin in qofka guriga leh oo watay calanka Naasiga inuu ka tirsan yahay ururada xag jirka ee dhinaca midig.